တရုတ်နိုင်ငံအကြောင်း။ | Language Century Language Century
2:27 AM C-Text , Chinese
တရုတ်ဘာသာစကား လေ့လာနေကြသူတွေအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအကြောင်းကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ လေ့လာနိုင်စေဖို့ အကြမ်းမျဉ်းအချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Zhōngguó de quánchēng shì Zhōnghuá rénmín gòng hé guó, wèi yú Yàzhōu dōngbù, shǒudū shì Běijīng.
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အခေါ်အဝေါ် အပြည့်အစုံက တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်၊ အာရှတိုက် အရှေ့ပိုင်းမှာ တည်ရှိပြီး၊ မြို့တော်က ပေကျင်းမြို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Zhōngguó yígòng yǒu èr shí sān ge shěng, wǔ ge zìzhìqū, sì ge zhíxiáshì ( Běijīng, Tiānjīn, Chóngqìng, Shànghǎi) hé liǎng ge tèbié xíngzhèngqū.
တရုတ်နိုင်ငံမှာ စုစုပေါင်း ပြည်နယ် ၂၃ ခု၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ၅ ခု၊ ဗဟိုအစိုးရမှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သောမြို့ ၄ ခု ( ပေကျင်း၊ ထျန်းကျင်း၊ ချုံချင့်၊ ရှန်ဟိုင်း ) နဲ့ အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၂ ခု ရှိပါတယ်။
Xiànzài Zhōngguó de zhǔxí shì Xí Jìnpíng, zǒnglǐ shì Lǐ Kèqiáng.
လက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ ဥက္ကဌက ရှီကျင့်ဖျင် ဖြစ်ပြီးတော့၊ ဝန်ကြီးချုပ်က လီခဲါ့ချန် ဖြစ်ပါတယ်။
Zhōngguó yǒu shí sān yì duō rénkǒu, shì shìjiè shang rénkǒu zuì duō de guójiā.
တရုတ်နိုင်ငံမှာ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၃၀၀ ရှိပြီး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
Zài Zhōngguó yígòng yǒu wǔ shí liù ge mínzú, qízhōng zuì dà de mínzú shì Hànzú, qítā wǔ shí wǔ ge shì shǎoshù mínzú.
တရုတ်နိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား စုစုပေါင်း ၅၆ မျိုးရှိပြီး၊ အဲဒီထဲမှာ ဟန်လူမျိုးတွေက လူများစုဖြစ်ပါတယ်၊ တခြား တိုင်းရင်းသား ၅၅ မျိုးကတော့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Zhōngguó de guānfāng yǔyán shì pǔtōnghuà, zài Zhōngguó yígòng yǒu èr bǎi jiǔ shí èr zhǒng zhèngzài shǐyòng de yǔyán.
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တရားဝင် ရုံးသုံးဘာသာစကားက ဖူထုံးဟွာ့ဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်ပြည်မှာ စုစုပေါင်း ဘာသာစကား ၂၉၂ မျိုးကို အသုံးပြုပြောဆိုနေကြပါတယ်။
တရုတျဘာသာစကား လလေ့ာနကွေသူတှအေတှကျ တရုတျနိုငျငံအကွောငျးကို ဗဟုသုတအနနေဲ့ လလေ့ာနိုငျစဖေို့ အကွမျးမဉျြးအခကျြအလကျတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံရဲ့ အချေါအဝျေါ အပွညျ့အစုံက တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ ဖွဈပါတယျ၊ အာရှတိုကျ အရှပေို့ငျးမှာ တညျရှိပွီး၊ မွို့တျောက ပကေငျြးမွို့ ဖွဈပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံမှာ စုစုပေါငျး ပွညျနယျ ၂၃ ခု၊ ကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျရေးဒသေ ၅ ခု၊ ဗဟိုအစိုးရမှ တိုကျရိုကျအုပျခြုပျသောမွို့ ၄ ခု ( ပကေငျြး၊ ထနျြးကငျြး၊ ခြုံခငျြ့၊ ရှနျဟိုငျး ) နဲ့ အထူးအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ၂ ခု ရှိပါတယျ။
လကျရှိ တရုတျနိုငျငံ ဥက်ကဌက ရှီကငျြ့ဖငျြ ဖွဈပွီးတော့၊ ဝနျကွီးခြုပျက လီခဲါ့ခနျြ ဖွဈပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံမှာ လူဦးရေ သနျးပေါငျး ၁၃၀၀ ရှိပွီး၊ ကမ်ဘာပျေါမှာ လူဦးရအေမြားဆုံးနိုငျငံ ဖွဈပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံမှာ တိုငျးရငျးသား စုစုပေါငျး ၅၆ မြိုးရှိပွီး၊ အဲဒီထဲမှာ ဟနျလူမြိုးတှကေ လူမြားစုဖွဈပါတယျ၊ တခွား တိုငျးရငျးသား ၅၅ မြိုးကတော့ လူနညျးစုတိုငျးရငျးသားတှေ ဖွဈကွပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံရဲ့ တရားဝငျ ရုံးသုံးဘာသာစကားက ဖူထုံးဟှာ့ဖွဈပွီး၊ တရုတျပွညျမှာ စုစုပေါငျး ဘာသာစကား ၂၉၂ မြိုးကို အသုံးပွုပွောဆိုနကွေပါတယျ။